Collected Data | Useing standard fonts……………………..
Posted in နည်းပညာ, windows	by azeon45
(Myanmar Unicode Dictionary Software အားရယူရန်)
မိမိပြောင်းလိုသောဖိုင်များကို အင်္ဂလိပ်လိုနာမည်ပေးထားသေား ဖိုလ်ဒါတစ်ခုအတွင်းသို့ ထည့်ထားပါ
ထိုနောက် Myanmar Unicode Dicitonary Software ကိုဖွင့်ပါ
အခြားကိစ္စ ပေါ်ကိုနှိပ်၍ ဖိုင်နာမည်ပြောင်းပေးသူ ထဲကိုဝင်ပါ
ထိုနောက် ဖွင့်ရန်နှိပ် မှတဆင့် မိမိပြောင်းလိုတဲ့ ဖိုင်တွေကိုရွှေးပေးလိုက်ပြီး အကုန်ရွှေးကာ Open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ထိုအခါ အထက်ပါပုံအတိုင်ဖြစ်သွားပေမည် ထို့နောက် အားလုံးရွေး ကိုနှိပ်ပါ ပြီးလျှင် ကူးမည် ကိုနှိပ်ပါ
ထို့နောက် အခြားကိစ္စ ပေါ်ကိုနှိပ်၍ ကနောင်ကွန်ဗာတာ ကိုဖွင့်ပါ
ပွင့်လာပါက ကူးလာသည်များကို ကနောင်ကွန်ဗာတာအတွင်း Paste လုပ်၍ ဇော်ဂျီမှ မြန်မာ၃ သို့ပြောင်းပါ
ပြောင်းပြီးပါက ပြောင်းထားသည့်စာများအား Select All ဖြင့် ကူးယူပါ
ဖိုင်နာမည်ပြောင်းသူ ပေါ်သွား၍ ကူးပြီးချမည် ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
ထို့နောက် သိမ်းမည် ကိုနှိပ်လိုက်ပါက မိတ်ဆွေ၏ ဖိုင်များအား ယူနီကုဒ်သို့ပြောင်းခြင်း အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားပါပြီ
**မှတ်ချက်။ ။ မည့်သည့်ဖိုင်အမျိုးအစားမဆို နာမည် ပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ဖိုင်ထည့်ထားသည် ဖိုလ်ဒါသည် မြန်မာလိုဖြစ်နေပါက ပြောင်းမပေးနိုင်ပါ။ Software အလုပ်လုပ်နှိုင်ရန် .net frame 3.5 and4လိုအပ်ပါသည်။ ( .net frame အား Microsoft web page တွင် အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်)
Posted in Android, နည်းပညာ, ယူနီကုဒ်, ios, macOS, windows	by azeon45
This guide is provided “as is”, without warranty of any kind, express or implied.
We shall not liable for any damage incurred due to this guide.
The methods may or may not work.
Q. iOS မှာ မြန်မာယူနီကုဒ် သုံးချင်လို့။ ဇော်ဂျီလည်း ဖတ်ချင်သေးတယ်။ နှစ်မျိုးလုံး ဖတ်လို့ သုံးလို့ရအောင် လုပ်လို့မရဘူးလား။
A. ဒီမှာ ကွီးနေဇာအပြည့်အစုံပြောပေးထားတယ်။
Q. iOS မှာ မြန်မာယူနီကုဒ်စစ်စစ် ပဲသုံးချင်တယ်။ fb မှာ ဇော်ဂျီပါလာရင်လည်း ဖတ်ချင်သေးတယ်ဟ။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းပြီး ကြည့်လို့ရတဲ့ နည်းမရှိဘူးလား။
A. ဒီလိုလုပ်။ ကိုသန့်ဇင်ဦးရေးထားတာ။ iOS10 အထိ ရတယ်ပြောတယ်။ 10 မတင်ရသေးလို့. :3
Q. Facebook မှာ ဘယ်သူကမှ ယူနီကုဒ်နဲ့မှမတင်တာ။ ငါက စောင်ဆွာကြီးလုပ်ပြီး ယူနီကုဒ် သုံးတော့ ငါက ဘာနဲ့သွားဖတ်ရမှာလဲ။ ယူနီကုဒ်သုံးတဲ့ website တွေကောရှိလားဟ :3
A. ဒီမှာ စုပေးထားတယ် ဖရင့် fb page တွေကော ယူနီသုံးတဲ့ website တွေကာ :3
Q. Windows 8, 10 မှာ ယူနီကုဒ်သုံးချင်တာ။ ဆိုင်က အဲ့တာ ဇော်ဂျီတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်မတုန်း။
A. ဒါလေးနဲ့ အမြစ်ဖြုတ်လိုက်။ ကွီးကျော်သူရအောင် အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး ရေးထားတာ
Q. Windows မှာ ယူနီကုဒ်သုံးတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ငါက browser ကနေ fb ကြည့်တော့ ဇော်ဂျီတွေ ဖတ်မရတော့ဘူးဟ။ လုပ်ပါဦး။
A. ဒါလေးတွေ သွင်းထား။ ကွီးသစ်၊ ကွီးဆန်း၊ ကိုသန့်သက်တို့ လုပ်ထားတာ
Chrome : Chrome
Firefox : Firefox
Q. Windows Officeမှာ မြန်မာ၃နဲ့ စာရိုက်တာ စာလုံးတွေ မမှန်ဘူးဟ။ ကွိစိကွစ တွေ ပေါ်နေတယ်။ လခွမ်း။ လုပ်ဦး။
Q. Windows မှာ Offline converter မရှိဘူးလားဟ။ ရှိရင်ပေးစမ်းပါ။
A. ဒီမှာဆွဲလေ။ ကိုမြတ်မင်းစိုး rabbit converter ကို အခြေပြုရေးထားတာ။
Q. Windows မှာ သဝေထိုးရှေ့ကရိုက်လို့ရတဲ့ ကီးဘုတ်မရှိဘူးလာဟ။ သဝေထိုးနောက်ကမရိုက်တတ်ဘူး။
Windows မှာ ဇော်ဂျီလက်ကွက်နဲ့ ယူနီကုဒ် ရိုက်လို့မရဘူးလား။ ယူနီကုဒ် လက်ကွက်က ခက်တယ်ဟ။ ၈။
A. မေးခွန်းနှစ်ခုလုံးတွက် အဖြေတစ်ခုထဲပဲ။ ဒါလေးသွင်းလိုက်။ ကိုသန့်သက်ရေးထားတာ
Q. မင်းတို့ ယူနီကုဒ်က Photoshop မှာ သုံးမရဘူးဟ။ လုပ်စမ်းပါဦး။
A. ကိုဇေယျာတို့ လုပ်ပေးထားတဲ့ အသောက ရှိတယ်။ 😀
Q. Android မှာလေ။ ယူနီကုဒ်သုံးနေတယ်ဟ။ ဆိုနီက built in ပါလာတာ။ ဇော်ဂျီကိုဘယ်လိုဖတ်မတုန်း.. အရေးအကြောင်းဆို လိုတယ်ဟ။
Q. ညေး.. ကွီး ဖုန်းမှာ ယူနီကုဒ်ပဲပါတော့ ယူနီကုဒ်ပဲ သုံးနေတယ်။ Facebook က အရင်တုန်းက see conversion ဆိုပြီး နှိပ်ရင် ဇော်ဂျီ (မြန်မာ) to ယူနီကုဒ်(မြန်မာ) ပြောင်းပေးတယ်။ အခု မရတော့ဘူးဟ။ ဘယ်လိုလုပ်ရတုန်း။
A. ကိုသန့်သက် အရင်က doc တင်ပေးဖူးတယ်။ ဘယ်လို force လုပ်ပြီး Conversion option ပြန်ဖော်ရတယ်ဆွာ။ ကိုထက်ဝေအောင် video tutorial လုပ်ပေးထားတယ်။
Q. Android မှာ ယူနီကုဒ်သုံးနေတယ်။ လခွမ်း operator တွေက ဇော်ဂျီနဲ့ မက်ဆေ့တွေ ပို့နေတာ ငါဘယ်လိုသွားဖတ်ရမတုန်း။ ဖာ့ခ်။
A. ကိုမြတ်မင်းစိုးရေးထားတဲ့ app သုံးလိုက်။ ဆင်ပြေသွားလိုက်မယ်။
Q. Android မှာ ယူနီကုဒ်ကော ဇော်ဂျီကော browser မှာ ဖတ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မတုန်းဟ။
A. Firefox က android မှာ add on support ပေးတယ်။ ဒါလေးသွင်းပြီးသုံး။
Q. စက်ရုပ်မှာ သဝေထိုး ရှေ့က ရိုက်လို့ရတဲ့ ကီးဘုတ်မရှိဘူးလားဟ။
A. ရှိဒေ ရှိဒေ ရှိလွန်းလို့။
Q. Android မှာကွာ ငါရိုက်တာတော့ ယူနီကုဒ် နဲ့ပဲရိုက်မယ်လေ။ ဇော်ဂျီပဲသုံးနေကြတဲ့ မိဘဆွေမျိုး တွေ စကီလေးတွေကို ချက်ချင်း ကွန်ဗက် တစ်ချက် tap တာနဲ့ ဘယ်လိုပို့ရလည်းဟ။
A. M3 keybard လေးသုံး။ အိုကေသွားလိုက်မယ်။ :3
Q. မြန်မာစာရေးထုံးနဲ့ပဲ ရိုက်ချင်တယ်ဟ။ လုပ်ဦး.. သဝေထိုး ပစောက် ရရစ် ရေးချာ.. ပြော .. အဲ့လိုမျိုးပေါ့..
A. အိုကေ ဒါလေးတွေ သွင်းထားလိုက်ကွီး။ စိတ်ကြိုက်ရိုက်ပေတော့ =D
For Windows – Keymagic
For Mac – Keymagic
For iOS –ttKeyboard
For Android –BayKeyboard, ttKeyboard
Q. Q&A တွေစုပေးထားတဲ့ လင့် ကဘယ်မှာတုန်းဟ။ လခွမ်း။ အရေးအကြောင်းဆို ရှာမရတော့ဘူး
A. ဒီမှာဗျ။ link ကို တွေ့တုန်း မှတ်ပြီး ဆောင်ထားချေ။ နောက်လည်း အလျဉ်းသင့်သလို update သွားဦးမယ်။ :3
( linkception ဟ :O xD )
Posted in စာပေ, ဆရာအောင်သင်း	by azeon45
ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်ရဲ့ ပရက်ရှာတွေ၊ မိသားစု အခက်အခဲတွေ၊ အားလုံးက က တပြိုင်နက် ဝိုင်း တွယ်ခံနေရတော့ လူလဲ စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး မျော့မျော့ဘဲရှိတော့တယ်ဗျို့. .
စာရေးဖို့ လဲ အချိန်မရ . .အလုပ်ကလဲ Hand Over အချိန်ဖြစ်နေလေတော့ ညဆိုင်းဖြစ်လိုက်နေ့ဆိုင်းဖြစ်လိုက် နဲ့ အတော်ခံစားလိုက်ရပါသဗျာ
သို့ပေမယ့် အဖေ့ အကြောင်းကို ရေးမယ် လို့ တာဝန်ကြီးတစ်ခုလို ယူထားမိလေတော့ ကျွန်တော် သိသလောက် ပြီးဆုံးသည်အထိ တော့ ရေးမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးနဲ့ ဘဲကိုယ့်ဖာသာကိုယ် အားတင်းပြီး သကာလ .. .တယ်လီဖုန်းကို ဆွဲကိုင်. . စာရိုက်ဆရာ တာဝန် ပြန်လည် ထမ်းဆောင်မိသည့်အကြောင်း အဖေ့အကြောင်းစောင့်ဖတ်နေတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို အစီရင်ခံအပ်ပါသည်ခင်ဗျား. . .
ပထမ တော့ အထင်ကရမှတ်မိနေခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ အဖေ့အကြောင်းလေးရေးမလို့ဗျ. . သို့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ အပိုင်း မှာ ရေးခဲ့တဲ့ အဖေ ပြောနေကြ အရသာရှိတဲ့ အက်ဆေး လေးနှစ်ပုဒ် ကို ပြီးအောင် ပြန်ရေးပြတာ ပိုပြီးအဓိပ္ပယ် ရှိမယ်ထင်လို့ အဖေပြောလေ့ရှိတဲ့ ဒုတိယ အက်ဆေးလေး ကိုဘဲရေးလိုက် ပါရစေခင်ဗျား. .
အက်ဆေးလို့ ပြောပေမယ့် တကယ်တန်း က ဝတ္ထု တိုဖြစ်ဖို့ များပါတယ်. . . ကျွန်တော် အမှတ်မှား နူတ်ကျိုးနေခဲ့လို့ပါ.
ကိုယ်တိုင်ဖတ်ဖူး ခဲ့ခြင်းမရှိသလို ဘယ်ကဝတ္ထု တိုမှန်းလဲမသိခဲ့ပါ. . . . စင်ပေါ်က အဖေ ပြောပြ ချိန်မှာ အရသာ ရှိလွန်းလို့ကြားဖူးပြီး မှတ်မိနေတဲ့ အကြောင်း အရာလေးပါခင်ဗျား. .
ကဲ. . .
အဖေရဲ့ ဒုတိယ ပြောပြလေ့ရှိတဲ့ ဝတ္ထု တို ကလေး . .ကိုပြောပြပါရစေ. .
တရံရော အခါ က တကယ့် ဆိုးပေ့မိုက်ပေ့ဆိုတဲ့ သူတွေကိုသာထားတဲ့ အကျဉ်းထောင်ကြီးတစ်ခုရှိပါသတဲ့. .
အဲ့ဒီ့အကျဉ်းထောင်ထဲ မှာဘဲ အဆိုးဆုံး ဆိုတဲ့သူတွေကို ထပ်ပြီး သီးသန့် ထားရပါသတဲ့ . . အဆိုးတကာ့အဆိုးဆုံး၊ ထောင့်တစ်သက်လွတ်ရက်မရှိတော့ တဲ့သူမျိုးများကိုသာ စုပြီးထားခြင်းဖြစ်လို့ အင်မတန် အန္တရယ်ကြီး သလို ..
သူ့အသက်လဲ အသက်မထင်၊ ကိုယ့့်အသက်လဲ အသက်မထင်တော့ တဲ့ သူတွေသာ ဖြစ်ကြပါတော့သတဲ့
အဲ့ဒီ့အဆိုးတကာ့အဆိုးဆုံးတွေ စုထားတဲ့ အထဲမှာ မှ အမိုက်ဆုံး အကြမ်းတမ်းဆုံးကောင်ကြီး တစ်ယောက်က တန်းစီးလိုမျိုးဖြစ်နေပြီး . . ဘယ်သူမှ ထိန်းလို့မရတော့တဲ့ သူတွေကို အဲ့ဒီ့ တန်းစီးလူမိုက်ကြီး ကဘဲ ထိန်းမှဘဲ ရပါသတဲ့. ..
အဲ့ဒီ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်နေဆဲမှာ ဘဲ. . ကျန်းမာရေး သုတေသန အဖွဲ့ တစ်ခု က ဆေးအသစ်တစ်မျိုးကိုတီထွင်နေပါတယ် .တီထွင်တဲ့ဆေး အမျိုးအစားကတော့ ကျောက်ရောဂါ၊ပုလိပ်ရောဂါလိုမျိုး ဆန်ဆန်. . . ကပ်ရောဂါ တစ်မျိုးကို ခု ခံကာကွယ်နိူင်တဲ့ antibiotic ပိုသတ်ဆေး အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး . ယခင်ကတည်းက ဒီလိုကူးစက်ရောဂါမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင် .လူတွေအတွက် အင်မတန် အပျက်အစီးများ၊စေခဲ့ဘူးတဲ့ သာဓကများစွာရှိ ပါသတဲ့. .
သို့သော်. . . ဆေးတီထွင်ပြီးချိန်မှာ.ဒီကပ်ရောဂါ အမျိုးအစား ဖြစ်နေသောနေရာ. . ဖြစ်နေသောသူတွေ မရှိတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေပါသတဲ့..
ဆေးသုတေသန ကတော့ စမ်းသပ်ခန်းမှာ ကြွက် ၊ ပူး၊ ယုန်၊ မျောက်၊ နောက်ဆုံးမြင်းအထိ စမ်းသပ်ပြီးပျောက်အောင်ကု နိူင်ခဲ့သော်လဲ. . လူ ကို စမ်းဖို့အတွက် လူနာမရှိဘူးဖြစ်နေပြန် ၊ သာမန်လူ ကို စမ်းသပ်ဖို့ မဖြစ်နိူင်ပြန်သောကြောင့် အကြပ်တွေ့နေကြပါသတဲ့ . . ဒါ့ကြောင့် . . ဒီဆေးကို အောင်မြင်ပြီလို့ လုံးဝ အာမ. မခံနိူင်၊မထုတ်လုပ်နိူင်ဘဲ ဖြစ်နေကြပါသတဲ့
. .ဒါနဲ့ သူတို့ ရဲ့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေခြင်း ကို အကြောင်းစုံ ဖွင့်ပြ ပြီး အကျဉ်းဦးစီး ဌာန ကို အကူ အညီတောင်းတဲ့ အခါ.. . . နောက်ဆုံး အကျဉ်းဦးစီးဌာနက လက်ခံပြီး. . ထောင်တစ်သက်လွတ်ရက်မရှိတော့တဲ့သူတွေ ကို ကြေငြာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန် ပေးတဲ့ အဆင့့်အထိရောက်လာပါသတဲ့. ခင်ဗျား. .
အဲ့ဒီ့အကျဉ်းသားတွေကို ကြေငြာပေးလိုက်တဲ့ အချက်တွေကတော့
ပထမဆုံး ဒီကပ်ရောဂါ အကြောင်း၊ဒီဆေးတီထွင်မှူ့ အကြောင်း ပူး၊ ကြွက်၊ ယုန် ၊မျောက် နောက်ဆုံး မြင်းအထိ စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်း. . နောက်ဆုံး. လူကိုစမ်းသပ်ဖို့တစ်ခုဘဲ ကျန်သည့်အကြောင်း. . ဒီဆေးအောင်မြင်သွားခဲ့ရင် လူသားတွေအတွက် အင်မတန် အကျိုးရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း.
ဒါကြောင့်မို့ . ဒီဆေး ကိုအကျဉ်းသားထဲက မည်သူမဆို စိတ်ဝင်စားခဲ့ရင်လူသားတွေအတွက် ကောင်းမှူ့ ကုသိုလ် အဖြစ် ဝင်ရောက် အစမ်းသပ် ခံနိူင်ကြောင်း၊ ဆေးက အောင်မြင်ဖို့ များကြောင်း. . သို့သော် ဆေးက မအောင်မြင်လို့. အဆင်မသင့်ရင်လဲ သေသွားနိူင်ကြောင်း၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့် ရှိကြောင်း. .
နောက်ဆုံးမှ အကယ်၍ ဆေး ကအောင်မြင်ခဲ့လို့ အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တော့. .ကျေးဇူး တုန့့်ပြန်တဲ့အနေနဲ့. . . အမဲသားတစ်ဗူး. .စီးကရက်နှစ်ဗူး လက်ဆောင်ပြန်ရမယ်လို့ ကြေငြာစေပါတယ်.
နှစ်ရှည်လများအကျဉ်းကျ ခံထားရတဲ့သူတွေအဖို့ အမဲသားကို သိပ် စိတ်မဝင်စားလှသော်လဲလုံးဝမမြင်ရတာကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ စီးကရက်ဆို တဲ့ အသံကြားချိန်မှာ အားလုံး ပါးစပ်တပြင်ပြင် နဲ့ သွားရည် ယို မိကြပါသတဲ့ . . သို့သော်ပေးရမယ့်အရင်းအနှီးက များလွန်းတော့ လူအတော်များများ တွန့်နေကြချိန်မှာ…
တကယ့်သေမထူးနေမထူး လို့စိတ်က ခံယူ ထားသူ . . တန်းစီး လူမိုက်ကြီးအပါအဝင် ၁၅ ယောက်လောက်ကတော့ အစမ်းသပ်ခံမယ် ဆို ပြီး . .စာရင်းပေးကြပါသတဲ့
ဒါနဲ့ ဘဲ ဆေးတီထွင်သူတွေက အစမ်းသပ်ခံအကျဉ်းသားတွေကို စတင်ရောဂါပိုးထိုးထည့် ပေးလိုက်ပြီး ရောဂါဖြစ်သည်အထိ စောင့်ကြည့် ၊ ရောဂါကြောင့် အကျဉ်းသားတွေလဲ လူးလှိမ့်နေအောင်ခံနေရချိန်၊ရောဂါ ဖြစ်ပွား တာသေချာချိန်ကျ မှ စတင်ပြီးဆေးကု ၊ လူနာတွေရဲ့တိုးတက်မှူ့ အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ပြီးဆေးပြန် ကုလိုက်တာ . . ကံအားလျော်စွာ အကျဉ်းသားဆယ်ငါးယောက်စလုံး. . ရောဂါပျောက်ပြီးပြန်လည် ကျန်းမာလာကြပါသတဲ့. .
ဒါနဲ့ ထောင်ပိုင်က လဲ သူပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း. .အကျဉ်းသားတွေ ပြန်လည် နာလန်ထ ထူထောင်လာချိန်မှာ အစမ်းသပ်ခံ. အကျဉ်းသားအားလုံးကို တန်းစီခိုင်း.. …ရွဲ့စောင်းပြီး ယိုင်ထိုးထိုးနဲ့တန်းစီ မတ်တပ် ရပ် နေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို အမဲသားတစ်ဗူး စီးကရက် နှစ်ဗူး ကို တစ်ဦးချင်းလိုက်ဝေပေးပါသတဲ့ .
အကုန်လုံး လဲ တပြုံးပြုံးနဲ့ သူတို့ ရတဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီး ပျော်နေကြချိန် နောက်ဆုံး မိုက်ပေ့ဆိုတဲ့ တန်းစီးအကျဉ်းသားကြီး အလှည့်ရောက်ချိန်မှာတော့. . တန်းစီး လူမိုက်ကြီးက လက်ဖြန့်ပြီး မယူဘဲ လက်ပိုက်ရင်း သူ့ကိုပေးနေတဲ့ လက်ဆောင်ထုပ်ကလေးကိုသာငေးကြည့်နေပါသတဲ့
ဒါနဲ့ ထောင်ပိုင်ကလဲ. … မင်းဘာဖြစ်လို့မယူတာလဲ. .. ငါတို့မှာ ပိုပေးခွင့့်မရှိဘူး. . ဒါဟာ . အားလုံးကိုကြေငြာပြီးသား.မင်းလဲ သဘောတူလို့ လုပ်ခဲ့တာ . မင်းယူစရာရှိတာကိုသာ. . အေးအေးဆေးဆေး ယူလိုက်ပါ၊ ငါတို့ ဘာမှ ထပ်လုပ်မပေးနိူင်ဘူးနော် လို့ ပြောလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ
တန်းစီးလူမိုက်ကြီးက. .. တွေတွေကြီးစိုက်ကြည့်နေရာက . ခေါင်းကို ငြင်းဆန်တဲ့ပုံနဲ့ အသာ ခါလ်ိုက် ပြီး. . စကားခပ်လေးလေးနဲ့ ပြောပါသတဲ့. . .
မဟုတ်ပါဘူး. . ကျုပ်လဲ မလိုချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး.. . လိုချင်ပါတယ် . ဒါဘဲရမယ်ဆိုတာလဲသိပါတယ်. ..ဒါပေမယ့်. ကျုပ်စဉ်းစားမိတာက တခြားဗျ .. . . .
.ကျုပ်တစ်သက်မှာ လူ့လောကအတွက် ကောင်းမှူ့ ကုသိုလ် ဆိုလို့ တစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူးဗျ. . . ဒီတစ်ခါလေးဘဲ လူ့လောက အတွက် ကောင်းမှူ့လေးလုပ်ဖူးတာကို. . ဒီအမဲသားတစ်ဘူး . စီးကရက် နှစ်ဗူးနဲ့ မလဲ တော့ဘူး ဗျာ. . .
ပြန်ယူသွားကြတော့ ကျုပ် မလိုချင်တော့ဘူး . .
အဖေ ပြောတဲ့ ဝတ္ထု တို လေးကတော့ ဒါပါဘဲ .ဒီဝတ္ထု တို လေးကို ပြော
ပြီးသွားချိန်မှာ အဖေ အမြဲ ဆက်ပြောလေ့ရှိတာကတော့. .
(အသံ ကို မြှင့်ပြီး)
ကိုင်း.. လောကကြီးရဲ့ သဘောက ဒီအတိုင်းဘဲ. တခါတရံ. . . အမဲမှောင်ဆုံးဆိုတဲ့ တိမ်တိုက်မှာတောင် ငွေရောင်အနားကွပ်တွေရှိတတ်ပါတယ်. . .
ငွေစင်ရောင်လှပေ့ဆိုတဲ့ လမင်း ကြီးမှာလဲ အမဲရောင် ရိပ်တွေ ရှိတတ် တဲ့သဘောရှိတယ်ဗျ .. . . ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဝေဖန်ချက်ကလေးနဲ့ အရသာယူပြီး စကားပြောခြင်းကို အဆုံးသတ် လိုက်လေ့ရှိပါတယ်. .
အဲ. . . အခု . . . ဒီစာ ဒီ ဝတ္ထု တိုလေးကိုတော့ရေးပြလို့ပြီးပါပြီ. .
သို့သော် ဒီစာ ကိုရေးနေရင်း
မပြီးနိူင်ဘူးဖြစ်နေတာက ကျွန်တော်ဗျ. .
အဖေနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ အမဲမှောင်ဆုံးတိမ်တိုက်မှတောင် ငွေရောင် အနားကွပ် တွေရှိတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးစကားက ခေါင်းထဲ မှာ စွဲနေပြီး.ယခုလက်ရှိ. မြန်မာ့နိူင်ငံရေးနဲ့ တဖြေးဖြေးခြင်း ဆက်စပ်စဉ်းစားမိလာလို့ပါ
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လ လောက်ကစ..အစိုးရအပြောင်းအလဲ ကိုကြည့်ပြီး .. ရင်ထဲ မှာ ကြည်နူးနေ .ဝမ်းသာ နေမိတာ
..အော်. . . . အဖေ ပြောခဲ့သလိုဘဲ. . ငါတို့ နိူင်ငံကြီးရဲ့ အမဲမှောင်ဆုံး တိမ်တိုက်တွေမှာလဲ ငွေရောင်အနားကွပ်ကလေး တွေ ရှိနေကြသကိုး. . တော်ပါသေးရဲ့ဆိုပြီး. . အကြိမ်ကြိမ်.သာဓုခေါ်ရင်း ရင်ထဲမှာ တသိမ့့်သိမ့်.ကြည်နူးနေမိတာ. . . .
ဘယ်ကလာဟုတ်ရမှာတုန်းဗျ. . နှစ်ပတ်ကျော် .သုံးပတ်လောက်ဘဲ ရှိသေး. . နည်း မျိုး စုံကို စ လုပ်ကြတော့တာကိုး ..
တိုင်းပြည် နုနု ကို အပမှီနေပါတယ်ဆိုပြီး ဘုရားပန်းနဲ့ ရိုက်လို ရိုက်. .
တစ်လတောင်မပြည့်သေးတဲ့. . အစိုးရလည်ပင်းကို ဖုတ်ဝင်နေသလိုလို၊ အပ မှီနေသလိုလို ဝိုင်းစွပ်စွဲပြီးပရိတ်ကြိုးတွေ အတင်းစွပ် ဆေးကြိမ်လုံးလိုလိုဘာလိုလိုတွေနဲ့ ဝိုင်းထိုးနေကြတာတွေ့ ရတော့မှ
ဟယ်….. . ဒါ. . ဟိုး. အရင်ကတည်းကငါသိခဲ့ဘူးတဲ့ . လက်မဲကြီးပါ့လားလို့ ပြန်သတိထားမိတော့တာကိုး. .. ဆိုးချက်ဗျာ
အဖေ သာရှိနေသေး ရင် တော့ အဖေ့ကို ပြောပြချင်သေးတာ. ..
အဖေ . … အဖေ့ . .အမဲရောင် တိမ်တိုက် ကြီးတွေက လဲ အနားကွပ်မှာ. . . ငွေရောင်လေးတစ်ချက် လက်ကနဲ့ပြပြီး. . အနက်ရောင် အနားကွပ် ကြီးတွေ ပြန်ဖြစ် နေပါပေါ့လား အဖေရဲ့ ဆိုပြီးပြောမိမှာပါ. .
သူကလဲ . . ငါ့လခီီွး. . စိတ်ပျက်စရာကွာ ဆိုပြီး. …ထ ဆဲမှာ သိပ်သေချာပါတယ်ခင်ဗျား ..
ကျွန်တော်တို့ အတော် ကြိုးစားပြီး တိုင်းပြည်တည် ကြရအုန်းမှာပါခင်ဗျား. . လက်အမဲ ကြီးတွေက . ထုံးသုတ်ပြီး . . လက်အဖြူယောင်ဆောင်ရင်လဲ . . သိအောင်လုပ်ကြရအုန်းမှာပါ. . ..
ဉာဏ်ကြီးသော . . တိုင်းသူ ပြည်သားများ ကံကောင်းကြပါစေလို့ သာဆုတောင်း လိုက်ပါရစေခင်ဗျား
(ပြီးမှဘဲ edit ပါရစေခင်ဗျား)
ဆရာအောင်သင်း	Leaveacomment
Posted in နည်းပညာ, ယူနီကုဒ်, Computer	by azeon45
ဖိုင်နာမည်များကို ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ အများကြီးပေးထားပြီးမှ အားလုံးကို ယူနီကုဒ်ပြန်ပြောင်းချင်ရင်အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်က ဖိုင်လေးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.. ပုံမှာပြထားတဲ့ခလုတ်တွေကို အစဉ်လိုက် နှိပ်သွားရုံပါပဲ
၁။ ဖွင့်ရန်နှိပ်ဆိုတဲ့ခလုတ်ကကိုနှိပ်ပြီး ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတဲ့ဖိုင်တွေကို ဖွင့်ပါ။
၂။ အားလုံးရွေးခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး Select all လုပ်လိုက်ပါ။
၃။ ကူးမည်ကိုနှိပ်ပြီး ကော်ပီကူးလိုက်ပါ။
၄။ Unicode converter တစ်ခုခုမှာ သွားပြီး Paste ပြီး Unicode ပြောင်းပါ ၊ ပြောင်းပြီးသားကို ပြန်ကော်ပီခဲ့ပါ။
Converter : http://mrdba.info/unicode-converter/
၅။ ကူးပြီးချမည် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ ။
၇။ ရှင်းမည်ကိုနှိပ်ပြီး ရှင်းလိုက်ပါ။
၈။ မိမိဖိုင်တွေအားလုံး ယူနီကုဒ်ပြောင်းပြီးသားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.။.
Huawei G730 U00 Fleshable Unicode font
Posted in Android, နည်းပညာ, ယူနီကုဒ်	by azeon45
Huawei G730 U00 တွေအတွက်ပါ ဒါကိုသွင်းဖို့အတွက် Root (or) cwm လိုပါတယ်
root ဖောက်ပြီးရင် Mobileuncle Tool နဲ့ cwm ကို သွင်းပါမယ်
ပထမ cwm file ကို sd card ထဲကို extract လုပ်ပါ HUAWEI-G730-U00_131128__recovery_140118-103300.img
ဆိုတဲ့ဖိုင်ကို sd card ထဲးမှဒီအတိုင်းထည့်ထားပေးပါ အဲ့ဒီနောက် Mobileuncle Tool ကိုဖွင့်လိုက်ပါ Root Access တောင်းပါမယ်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် Recovery Update ကိုနှိပ်ပြီး HUAWEI-G730-U00_131128__recovery_140118-103300.img
ကိုရွေးပေးလိုက်ရင် cwm သွင်းပေးသွားပါမယ် ပြီးရင်အခုပေးတဲ့
Font zip လေးကို cwm ကနေ သွင်းလိုက်ရင် ယူနီကုဒ်ဖောင်လေးနဲ့ လန်းနိုင်ပါပြီဗျာ
Unicode font zip file
CWM img file